အက်ပဲလ်တီဗီကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်အသစ်များ၏အရောင်များ၏အလားအလာ | ငါက Mac ပါ
ယရှေု Arjona Montalvo | | Apple က TV ကို, NOTICIAS, အတော်ကြာ
လွန်ခဲ့သောတစ်ပတ်ခန့်က Apple သည်၎င်းကိုဖြန့်ချိခဲ့သည် ကြော်ငြာလှုပ်ရှားမှု ၏အလားအလာမြှင့်တင်ရန် Apple TV အသစ်ငါတို့သိသည့်အတိုင်းအောက်တိုဘာလကုန်တွင်စတင်ခဲ့သည်။ အဲဒီစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးဟာကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်အသစ်တွေနဲ့အတူပါ။ ပိုစတာအသစ်များသည်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းတွင်စတင်ပေါ်ပေါက်လာသည် အမေရိကန် ကုမ္ပဏီ၏နောက်ဆုံးပေါ် set-top box ကိုမြှင့်တင်ရန် Apple အသုံးပြုနေသည့်အရောင်တူတူပင်ဖြစ်သည်။ ဒီမှာ ဓါတ်ပုံပြခန်း ဒီအက်ပဲလ်တီဗီကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်များနှင့်အတူ။
လူသိများသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုမှစုဆောင်းထားသည့်ပုံရိပ်များကသက်သေပြသကဲ့သို့ပိုစတာများ Apple TV ကြော်ငြာ ပြီးသား၏မြို့ကြီးများတွင်ထင်ရှားပါပြီ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်၊ ကယ်လီဖိုးနီးယား၊ နယူးယောက်၊ နယူးယောက်နှင့်ကိုလံဘတ်စ်နှင့်အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်.
၎င်းသည် Cupertino အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီ၏အစမျှသာဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။ ၎င်းသည်အက်ပဲလ်တီဗွီအသစ်ကိုစတိုင်လ်ဖြင့်တိုးမြှင့်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်၊ အထူးသဖြင့်သူတို့ရင်ဆိုင်နေရသောအလားအလာကိုသူတို့သိသောကြောင့် ခရစ်စမတ်စျေးဝယ်ရာသီ.
ကျနော့်အမြင်ကတော့သူတို့က Apple သုံးစွဲသူအားလုံး Apple ကိုတောင်းတဲ့လမ်းမှန်ကိုရောက်နေတယ်ဆိုတာပါ။ ငါမှာ Apple TV3ရှိပြီးအရမ်းစိတ်ပျက်ခဲ့တယ်ဒီအက်ပဲလ်တီဗီအသစ်ရဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနဲ့စျေးနှုန်းကိုကြည့်ပြီး \_ t အဲဒါကိုပြန်စဉ်းစားမိတယ်။ ငါသာမြင်နိုင်ပါသည်သောဆုံးဖြတ်ချက်အတွက်ကင်းမဲ့လိမ့်မယ် DTT စတိုင်တီဗီသို့မဟုတ်ယင်း၏ငွေပေးချေမှုလမ်းကြောင်းများဖြင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုသည်အလွန်ရှုပ်ထွေးသွားသည်။ ဒီမှာ link ကိုငါတို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ပက်ဒရိုကသူ့ကိုလုပ်ခဲ့တယ် လုပ်ဆောင်ခြင်း ဒီ TV တီဗီအသစ်ရဲ့အံ့သြစရာပါ။
ငါက Mac ကနေ၊ ခင်ဗျားကိုမေးခွန်းတစ်ခုမေးတယ်။ အားလပ်ရက်တွေအတွက် Apple TV အသစ်ဝယ်ဖို့စီစဉ်နေသလား။.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple ကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ » Apple က TV ကို » အသစ်တီဗီကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်များ၏အရောင်များ၏အလားအလာ
Black Friday, Mac အတွက်အကောင်းဆုံးအပေးအယူများစုဆောင်းခြင်း